Vaovao - Nivoaka tamim-pahombiazana tamin'ny Internet ny sisin-tany 100m voalohany an'i Zhongfu Lianzhong
Tamin'ny 1 septambra 2021, dia vita an-tserasera an-tsakany sy an-davany ny sisin-tsoratry ny turbine rivotra 100 metatra voalohany an'i Zhongfu Lianzhong tao amin'ny toby famokarana elatra Lianyungang. Ny halavany dia 102 metatra ny halavany ary mandray teknolojia fampidirana interface vaovao toy ny balizy lehibe amin'ny fibre carbon, prefabrication root root ary prefabrication auxiliary rooting edge, izay manafoana ny fihodinan'ny famokarana basy ary manatsara ny fahamendrehana kalitao.
Zhongfu Lianzhong dia iray amin'ireo orinasa voalohany nirotsaka tamin'ny fivoarana, famolavolana, famokarana, fanandramana ary serivisy an'ireo mpilahatra megawatt blades any Shina. Izy io dia manana ekipa R & D an-trano matanjaka, ny famokarana lelam-baravarana lehibe indrindra ary ny vokatra andian-tsarimihetsika feno indrindra. Nandritra ny folo taona lasa, Zhongfu Lianzhong sy ny herin'ny herinaratra dia nanitatra hatrany ny sehatra, ny saha ary ny fomba fiaraha-miasa ary nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra. Ny s10 S102 novokarina tamin'ity indray mitoraka ity dia zava-bita manan-danja iray hafa amin'ny fiaraha-miasa roa tonta. Nandritra io vanim-potoana io dia niara-niasa tamim-pahatsorana sy nandamina tamim-pitandremana ireo mpiasan'ny andaniny sy ny ankilany, ary asa maro no nifarimbona. Nandresy ny olan'ny fotoan-tsarotra sy ny asa mavesatra izy ireo, nahavita ny lahasa asa efa niasa tamina kalitao sy habetsahana ary niantoka ny fivezivezena an-tsakany sy andavan'ny s102 voalohany.
Tsara ny manamarika fa ny famokarana herinaratra isan-taona amin'ity singa tokana ity dia afaka mahafeno ny herin'ny fianakaviana 50000 isan-taona, izay mitovy amin'ny fampihenana ny famoahana gazy karbonika 50000 taonina isan-taona. Fitaovana iray lehibe eo amin'ny sehatry ny angovo any Sina izy ity hahatratrarana ny tanjon'ny tampon'ny karbaona sy ny fanamafisana orina ny karbaona ary manome fanohanana matanjaka amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny fampandrosoana angovo vaovao amin'ny drafitra dimy taona faha-14.
Araka ny drafitra, ny lelan'ny S102 dia hatolotra any amin'ny foibem-panandramana Zhongfu Lianzhong hanatanterahana fitsapana voajanahary voajanahary, static, havizanana ary fitsapana aorian'ny static. Ny R&D sy ny fanandramana ny lelany dia hampiroborobo ny fampiharana indostrialy ny velarana lehibe sy ny singa MW lehibe ao Shina ary hanokatra vanim-potoana vaovao an'ny herin'ny rivotra any ivelany.